Janet Jackson akatadza kuroora naWissam Al Mana: 6 zvinonakidza zvitsva zvirevo - Nhau
Kuru Blog Nhau Varaidzo Macelebs
Janet Jackson akatadza kuroora naWissam Al Mana: 6 zvinonakidza zvitsva zvirevo
Muna Kubvumbi, nyika yakadzidza izvo Janet Jackson 's muchato wainge wapera .
Kunyangwe ngano yemumhanzi, makumi mashanu neshanu uye bhirionari muzvinabhizinesi weQatari Wissam Al Mana, makumi mana nemaviri, anga achingo akatambira mwanakomana Eissa muna Ndira, Janet akange atora danho rinotyisa rekuti aenderere mberi nekurambana.
Musi waSeptember 12, Vanhu akajekesa zvikonzero zvaJanet zvekusiya Wissam, sekureva kwa mukoma Randy Jackson. 'Kune marwadzo mazhinji. Janet anga ave kuburikidza nezvakawanda nekurambana kwake, 'Randy akaudza magazini. 'Yakanga iri mamiriro anoshusha. Zvakauya gare gare muhukama, kutukwa uye kuitirwa [kuitwa kuti unzwe senge] musungwa mumba make. Hapana mukadzi ane nhumbu anoda kupfuura kuburikidza kunzi b-- - mazuva ese. Paive nezvinhu zvakadaro. Ndizvo zvaakapindana nazvo. '
Magweta aWissam akaudza Vanhu mune chirevo kuti 'haasi kuzokudza idzi mhosva uye dzinokuvadza zvakanyanya nemhinduro,' achiwedzera, 'Kuparara kwemuchato wake Janet Jackson 'chiri chikonzero chekusuwa kukuru kuna Mr. Al Mana, uye ndiko kugara zvakanaka uye kuvanzika kwemwanakomana wavo, Eissa, izvo zvinoramba zvichingomutarisa.'
Musi waSeptember 23, Peji Rechitanhatu yakaburitsa nyaya refu yakanzi, 'Mukati Janet Jackson 'Imba ine matombo - uye kupatsanuka kwakashata,' izvo zvine zvimwe zvakazarurwa uye zvirevo pamusoro pezvakaitika panguva yekufambidzana kwevakaroorana vari vaviri. Heano zvitanhatu zvezvinonyanya kufadza zvirevo:
1. Kunyangwe vakabva kunzvimbo dzakasiyana uye Janet anga akura kusvika makore gumi, apo muzvinabhizimusi akasimudzirwa uye muzvinabhizimusi wepop, akakurira mukutenda kweZvapupu zvaJehovha, akavhara maziso mushure memusangano pakuvhurwa kweArmani Hotel muDubai mu 2010, 'Yaive imwe yeaya erudo-pakutanga-kuona-mhando zvinhu,' mhuri yeJackson yemhuri yakaudza Peji Yechitanhatu. 'Havana kuita hanya neyakaitika yeumwe neumwe.'
Vakachengeta kufambidzana kwavo zvakavanzika zvisingaite. 'Aizomutengera majaketi aine mavara ake ekutanga akanyorwa uye aigona kuraira zvinonaka kubva kuSwitzerland nedzimwe nzvimbo senzira yekuti' Mangwanani mangwanani, mudiwa, '' akapinda mukati akagovana, achiwedzera kuti vaviri ava vakadanana pakudya kwemanheru muRussia, vachitenga nzendo muItari uye mabhanduru pamahombekombe emhando yepamusoro.
2. Sezvavakatanga kudzika murudo, Janet akatanga kuchinja. Haana kubvira atendeukira kuIslam, asi murume wemhuri akaudza Peji Yechitanhatu, shamwari dzaWissam dzakaona 'Janet ari kutevedzera tsika dzechiIslam, kusanganisira chipfeko chake chakafukidzwa mumusoro.' Iye zvakare akatsanya 'panguva dzekuratidzwa pamweya,' New York Post ikholamu yakashuma. Mhuri yaJanet yakacherekedza kuti 'aisataura zvechimbi chimbi kana aine vamwe. [Wissam] ndiye akatungamira. '
3. Muna Kukadzi 2013, vakaratidza kuti vangadai vakanyarara vakaroora gore rapfuura mushure memakore angangoita maviri semurume nemukadzi. Ivo vaida kuroora nekukurumidza, sosi yemhuri yakaudza Peji Yechitanhatu, nekuti 'Ainyatsoda mwana uye Janet aive akagadzirira.' Asi Janet akange atove nemakore ekuma40. 'Kanokwana kaviri, aifunga kuti ane nhumbu, uye nguva dzese akaona kuti haana, uye handizivi kuti ndiani akanyadziswa,' akadaro mutsime wemhuri, achiwedzera kuti nhau dzakaipa dzakadzokororwa dzakasimudzira kusagadzikana nekutungamira vese kupomera mumwe. Ivo vaizo'nongedzera munwe kune mumwe nemumwe sechikonzero vaisakwanisa kubata nhumbu, 'sosi yemhuri yakadaro.
4. Janet anga achiri kugadzira mimhanzi nekushanya, asi Wissam anonzi aisamuda mumadhirezi ake echinyakare, saka akafukidza. Mumwe mushandi akaudza Peji Rechitanhatu kuti Janet paaigadzirira kunoridza kuStaples Center muLos Angeles, Wissam yaitonga zvidzidziso. 'Hapana ganda, hapana humping yakaoma uye hapana chimwe chezvinhu zveAmerica,' akadaro mushandi Wissam.
5. Janet akakanzura rwendo rwake rwekuti 'Rusingaputsike' muna 2016 (akazorutangisa zvakare kutanga kwaGunyana 2017 seHurumende yeWorld Tour) apo iye naWissam pavakazowana nhau dzakanaka: Aive nepamuviri aine makore makumi mana nemapfumbamwe. sosi yemhuri ikati, va - vakarova fan. Janet aigara achidya zvakanaka, achirovedza muviri zvakanaka uye achizvichengeta achitaridzika zvakanaka, asi Wissam akaita kunge akasununguka, achifunga kuti aizove iri 'yakakora nguruve.' 'Akanga ari paari nguva dzese nezvekuita zvinhu nemazvo, achidya mushe, sekunge iye [anga asiri] kare.'
6. Mwanakomana Eissa akazvarwa muna Ndira 3. Pasina nguva refu, Janet akabva kuWissam achibatsirwa nemukoma wake. Vemumhuri iyi vakaudza Peji Yechitanhatu kuti Randy akaronga Janet kusiya imba yeLondon iyo yaakagovana nemurume wake. Randy, iyo Post inonyora, 'vakaronga chinyararire kuti hanzvadzi yavo mukuru Rebbie naamai Katherine vabhururuke kuenda kuLondon kunoshanyira Janet - uye mepu nzira yekubuda nayo.' Mhuri yake yakamupa simba raaida kuti 'asiye murume wake anotonga,' sosi yemhuri yakadaro.
Bella Thorne anoratidza kuti akashungurudzwa pabonde achiri mudiki
Sylvester Stallone gava resirivheri: Ona chimiro chake chitsva
ben affleck jennifer garner vana
Eve murume ane makore mangani
jodie Turner-smith murume
roseanne barr pana donald trump
orange County choppers show yakanzurwa
vangani vanhu vari mu ellen vateereri